Thomas Partey ayaa la sugayaa inuu kulankiisii ugu horreeyey ugu soo bilowdo kooxdiisa cusub ee Arsenal marka ay Sabtida u tagaan Manchester City oo ciyaartooda koowaad ee xili ciyaareedkan ay ku kulmayaan garoonka Etihad Stadium.
Tababare Mikel Arteta ayaa isticmaali kara Kieran Tierny oo tijaabadii ugu dambaysay ee caafimaad ee lagaga sameeyey xanuunka Korona Fayraska lagu ogaaday inuu badqab yahay oo uu ciyaari karayo, taas oo siinaysa kala-doorasho safkiisa koowaad ah oo uu kasoo xulan karayo ciyaartoyda uu ugu kalsoonida badan yahay.
Xiddiga khadka dhexe ee £45 milyan ee Gini ay kagala soo wareegeen Atletico Madrid maalintii ugu dambaysay suuqa iibka ciyaartoyda ee xagaagan ayaa kasoo muuqan doona khadka dhexe, waxaanu halgan la geli doonaa laacibiin aanay badankooda ku kulmin garoomada oo Pep Guardiola uu lasoo shir tegi doono.
Laacibkan reer Ghana ayaa xasillooni iyo degganaan khadka dhexe ah siinaya Arsenal, waxaana uu khatarihii iyo kubbadihii badnaa ka joojinayaa difaaca Gunners ee afartii ciyaarood ee ay soo dheeleen saddex ka mid ah awoodda usoo yeeshay inay goolkooda soo ilaaliyaan, kaliyana ay Liverpool ka badisay.
Thomas Partey ayay khubarada ciyaaruhu ku tilmaameen inuu yahay sidii Gilberto Silva oo kale oo Arsenal uu udub dhexaad u noqon doono.
Arteta ayaa waxa kale oo fursad u ah soo laabashada Tierny oo keeni doonta inuu difaaca ka garab ciyaarsiiyo David Luis, Gabriel Magalhaes iyo Hector Bellerin, taas oo ka dhigan in dhexda ay iska garab ciyaari doonaan Bukayo Saka, Dani Ceballos iyo Thomas Partey.
Pierre-Emerick Aubameyang, Willian iyo Alexandre Lacazette ayaa iyaguna isku soo garab bilaaban doona weerarka, iyadoo xilliyada dambena ay soo geli karayaan Nicolas Pepe, Nketiah, Maitland-Niles iyo xiddigo kale oo isbeddel ku samayn kara ciyaarta.
Halkan kaga bogo shaxda macquulka ah ee Arsenal kusoo bilaaban karto: